Chii chakasiyana pakati yebhasikoro ngowani kuita mutserendende muchando nengowani? - Jomo Technology Co., Ltd
Chii chakasiyana pakati yebhasikoro ngowani kuita mutserendende muchando nengowani?
A mubvunzo vanhuwo iyo vanhu vanobvunza kuti, "Chii chakasiyana pakati yebhasikoro ngowani kuita mutserendende muchando nengowani?" Kunze pachena mutsauko nezviso, bhasikoro uye kuita mutserendende muchando nengowani chaizvoizvo vakuru dzakasiyana nenzira dzakawanda, uye uchida kuva nechokwadi kana iwe kutenga rworudyi mhando ngowani pamusoro akatasva kwako yemagetsi skateboard .
Unogona kuona musiyano iri nhau pakati bhasikoro nguva ngowani mumwe yakagadzirirwa kudzivirira musana romusoro wako. Image chikwereti: The Sweethome
Mumwe musiyano mukuru pakati bhasikoro nengowani uye kuita mutserendende muchando nengowani chaizvoizvo ukama hwavo vakasiyana mazano. Kuita mutserendende muchando nengowani, idzo dzinozivikanwa kumativi uye anotsvedzerera, kufukidza shure musoro wako. Izvi nokuti vakasikwa kuchengetedza pamusoro mapopoma kuti skateboarders arinonyanya tora, apo vanogona kunyika iri shure musoro wavo. Kusiyana neizvi, bikers kashoma kuwira pamusoro shure bikes dzavo.
Kuti yemagetsi skateboarder , ndingadai varumbidze kuwana ngowani anofukidza musana romusoro wako rakaita tsika kuita mutserendende muchando ngowani anoita. Nekuti bhodhi rako anokwanisa mhanyisa nokukurumidza, unogona kukandwa kure uye shure kana kuona zvikuru sei throttle uri kushandisa.
Mumwe guru musiyano kuita mutserendende muchando dzose ngowani yebhasikoro nengowani kukwanisa kudzivirira pamusoro rakasiyana-siyana aaiitawo. Traditional, Non-vaipupurirwa, kuita mutserendende muchando nengowani zvakagadzirirwa aine manyoro furo goko kuti kunodzivirira vakawanda ekushandiswa diki. Kusiyana, nenguwani bhasikoro anoitwa kubva pane zvakaoma EPS furo zvakagadzirirwa kutora imwe huru kwechirwere nokuputsanya, pashure unofanira kutsiviwa ngowani.
Kunyange tsika nengowani kuita mutserendende muchando, rakagadzirirwa kwomuzvarirwo Skateboards uye Electric longboards , kazhinji haana vanopupurirwa, unofanira kuwana kuita mutserendende muchando ngowani kuti anoshandisa chete dzakaoma EPS furo yebhasikoro ngowani ane, kuti achiri inodzivirira shure romusoro wako. Unogona kuudza nyore izvo kuita mutserendende muchando nengowani yakagadzirirwa izvi nenzira rekuona vari CPSC vaipupurirwa.
Chii Ngowani ndinofanira kutenga?
All of nengowani Handina akanyorwa rangu ngowani gwaro dziri CPSC vaipupurirwa uye yakagadzirirwa kudzivirira musana romusoro wako. Chero bedzi iwe nechokwadi une vanopupurirwa ngowani kuti ngetedzawo shure musoro wako, iwe uchava zvikuru ngozi pamusoro wako yemagetsi skateboar D.
Post nguva: Dec-11-2017